Arunima Lamsal’s mother Radha Lamsal talks about her daughter – Nepali Movies
Arunima Lamsal’s mother Radha Lamsal talks about her daughter
नयापत्रिका पत्रिका संग को कुराकानीमा राधा लम्साल ‘भावु’ ले आफ्नी छोरी अरुणिमालाई आफ्नी बहिनीको लागि भनेर जन्माएकी थिए भनेकी छिन.
बिहे हुदा म १७/१८ की थिएँ होला । ३० सालमा बिहे भयो । भर्खर आइए पढ्दै थिएँ । व्यावहारिक र आज्ञाकारी थिएँ । त्यतिवेला कम उमेरमा बिहे गर्ने चलन थियो ।
वेलैमा बच्चा पाएपछि हुर्काउन सजिलो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो मेरी आमा र सासूआमा । हामीले उहाँहरूको सल्लाह शिरोपर गर्‍यौँ । र, बिहे भएको दुई वर्षमै हाम्रा दुई छोरा भए । श्रीमान्को जागिर विराटनगरमा थियो ।
मपछिकी बहिनीको पनि बिहे भइसकेको थियो, तर बच्चा भएको थिएन । डाक्टरले मेरी बहिनीको बच्चा हुदैन भनेका थिए । दुई छोरा भएपछि हामी परिवारनियोजन गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ, तर मेरो उमेर कलिलो भएकाले परिवारनियोजन नगर्ने सल्लाह दिइयो । मेरा बहिनी र ज्वाइँले ‘म्रो बच्चा छैन, तपाइंहरूका दुइटा छोरा छँदै छन्, हाम्रा लागि एउटी छोरी जन्माइदिनूस्, हामी पाल्छौँ’ भने । दिदीबहिनी नभएकाले तिहारमा मेरा छोराहरू आमाजूकी छोरीको हातबाट टीका लगाउँथे । मलाई पनि एउटी छोरी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । हामी श्रीमान्-श्रीमतीबीच बहिनी र ज्वाइँका लागि एक सन्तान जन्माउने सल्लाह भयो ।
र, विराटनगर अस्पतालमा मैले छोरी जन्माएँ । त्यसवेला मेरो स्याहार, सुसार बहिनी-ज्वाइँले गरे । अस्पतालको खर्चबर्च पनि उनीहरूले नै बेहोरे । मैले बच्चा जन्माउनुअघि नै उनीहरूलाई भनेकी थिएँ, ँबच्चा देखेँ भने ममा आमाको ममता जाग्छ । त्यसकारण जन्मनेबित्तिकै लगेर विधि गरी आफ्नो गोत्रमा ढालिहाल्नू ।’ मेरी बहिनी विदेश बसेकी, निकै मोर्डन । नवजात शिशु सम्हाल्न उसलाई गाह्रो लाग्नु स्वाभाविकै थियो । उनीहरूले ‘भर्खरको बच्चा कसरी लग्नू, गाह्रो हुन्छ । न्वारान गरेपछि लग्छौँ,’ भने । त्यसपछि बच्चीको न्वारान भयो । ४ भदौको सूर्योदयमा जन्मिएकाले मेरा ससुराले बच्चीको नाम राखिदिनू भयो- अरुणिमा ।
बहिनी-ज्वाइँले अरुणिमालाई आफ्नो सन्तानलाई झैँ माया गरे । उनको स्याहार-सुसार गरे । भर्खर जन्मिएको बच्चा हुर्काउन आमाबाहेक अरूलाई मुस्किल हुन्छ । हामी एउटै घरमा डेरा गरी बस्थ्यौँ । बच्चा हुर्काउनुको सास्ती देखेर उनीहरूले भने, ‘बच्ची सानै छे । पास्नी गरेपछि लैजान्छौँ ।’
अरुणिमाको पास्नी पनि भयो । लगत्तै ज्वाइँको सोलुखुम्बु सरुवा भयो । त्यस्तो विकट र जाडो हुने ठाउँमा ६ महिनाकी बच्ची लगेर कसरी हुर्काउन सक्थे उनीहरूले ? र, यसरी अरुणिमा मेरै काखमा हुर्की । तर, मेरा बहिनी-ज्वाइँंले उसलाई यति माया गरेका छन् कि ऊ अहिले पनि उनीहरूलाई डयाडी-मम्मी भन्छे । हामीलाई चाहिँ बाबा-भावु भन्छे । ज्वाइँं अरुणिमालाई सानोमा ‘तिमी ठूली भएपछि हिरोइन बन्यौ भने म तिम्रो सेक्रेटरी बन्छु,’ भन्नुहुन्थ्यो । अहिले उनीहरू अमेरिका बस्छन् । अरुणिमालाई पैसा, कपडा पठाइदिइरहन्छन् । अरुणिमाको बिहेमा पनि पैसा हालिदिएका थिए ।
अरुणिमा बैंकर बन्न चाहन्थी तर बालकलाकार बनी
सानैदेखि अरुणिमा तीक्ष्ण बुद्धिकी थिई । पढाइमा अब्बल थिई । कक्षामा सधै पहिलो हुन्थी ।
सिलाइ, बुनाइ, डान्स, सबै कुरामा ऊ सिपालु थिई । पाँच कक्षामा पढ्दा हो क्यारे, उसलाई डान्स सिक्न मन लागेछ । स्कुल बिदा थियो । उसले ‘भावु, मलाई डान्स सिक्न मन लाग्यो,’ भनी । मैले उसलाई वसन्त श्रेष्ठको डान्स क्लासमा भर्ना गरिदिएँ । डान्सका स्टेप फटाफट टिप्थी । स्कुलमा हुने कार्यक्रममा निकै राम्राे नाच्थी । साथी बटुलेर उनीहरूलाई पनि घरमै डान्स सिकाउँथी ।
अस्थायी जागिर छाडेपछि मैले ब्युटीपार्लर सुरु गरेँ । अरुणिमाले पनि पार्लरको काम सिकी । एकचोटि सिकाएपछि उसलाई दोहोर्‍याएर सिकाउनु पर्दैन । उसलाई पार्लरका सबै काम आउँछन् ।
पहिले अरुणिमा फिल्म पटक्कै मन पराउँदिनथी । आमा-बाबु बैंकको जागिरे भएकाले ऊ धेरै पढेर बैंकर बन्छु भन्थी । म सुटिङमा हिँडिरहन्थेँ । उसलाई पनि आफूसँग लान खोज्थेँ । तर, ऊ जान मान्दिनथी । ‘राजेश हमाल, जल शाह छन्, हिँड’ भन्दा पनि वास्ता गर्दिनथी ।
बाल्यकालमा अरुणिमाले हामीलाई खासै सताइन । कहिलेकाहीँ भने जिद्दी गर्थी । साह्रै जिद्दी गरी भने म उसलाई पिटपाट गर्थेँ । अलि ठूली भएपछि भने उसले मलाई धेरै कुरा सिकाउन थाली । भन्न थाली, ‘भावु, तिमी पुरानो जमानाकी भयौ । नयाँ जमाना अनुसार चल्ने गर ।’
सानैदेखि घरको हिसाब-किताब राख्ने, किचनका सामान र कपडा आफै किन्ने गर्थी अरुणिमा । उनले खाना पकाउन पनि निकै जाँगर देखाउँथी । घरमा काम गर्ने मान्छे भए पनि किचेनमा पसेर आफैँ खाना पकाउने गर्थी । अहिले सुटिङमा कहिलेकाहीँ विभिन्न परिकार बनाएर खुवाउने गर्छे रे अरूलाई । घरमा पनि आफै खाना पकाउँछे ।
म सन्तोष पन्तले निर्देशन गर्ने लोकपि्रय टेलिशृंखला ‘हिजोआजको कुरा’ मा अभिनय गर्थेँ । अरुणिमा सात कक्षामा पढ्थी क्यारे । एक दिन उसलाई सुटिङमा लिएर गएकी थिएँ । त्यहाँ बालकलाकार चाहियो । सन्तोष पन्तले ‘अरुणिमालाई खेलाऊँ,’ भन्नुभयो । उसलाई खेलाइयो । सबैलाई छक्क पार्दै अरुणिमाले लामो संवाद फररर बोली । उसको अभिनय देखेर सबै जिल्ल परे । सन्तोषजीले भन्नुभयो, ‘यो नानी त निकै तगडा रहिछे । हिरोइन बनी भने सबैलाई खाइदिन्छे ।’
इगोले हिरोइन बनेकी हो
बालकलाकार भएर टिभीमा देखिए पनि उसलाई फिल्म खेल्ने इच्छा भने थिएन । मैले सुटिङमा लैजान खोज्दा ‘मेरो पढाइ बिग्रन्छ, जान्न,’ भन्थी । लिटिल एन्जल्समा दस जोड दुई पढ्दै थिई । कलेज-घर आउँदा-जाँदा निर्देशक दीपक श्रेष्ठले नयाँबानेश्वर चोकमा अरुणिमालाई देखिरहनुभएको रहेछ । सोधखोज गर्दै जाँदा उहाँले अरुणिमा मेरो छोरी हो भनेर थाहा पाउनुभएछ । अनि उहाँले ‘दस जोड दुई’ पढ्ने केटाकेटीका कथामा अजम्बरी माया नामक फिल्म बनाउँदै छु, मलाई अरुणिमा जस्तै कलाकार चाहिएको छ, रोल राम्रो छ,’ भन्नुभयो । मैले अरुणिमा फिल्म खेल्न नचाहने बताएँ । उहाँले ‘केही गर्नु पर्दैन, निरुता सिंहकी साथी, साइड हिरोइनको रोल हो, क्लासमा पढेझैँ गर्नुपर्छ,’ भन्नुभयो । मेरी साथी शैलजा पाण्डेकी छोरी कादम्बिनी पनि त्यस फिल्ममा खेल्दै रै’छे । अरुणिमा र कादम्बिनी साथी थिए । त्यसैले ऊ अजम्बरी मायामा खेल्न राजी भई ।
सुटिङमा अरुणिमाले एकदम हीनताबोध महसुस गरिछे । किनभने उनीहरूलाई त्यस्तै व्यवहार गरिएछ । निरुतालाई एकजनाले छाता ओढाइरहने र छिनछिनमा जुस ल्याइदिरहने, तर अरुणिमालाई भने कसैले वास्तै नगर्ने । अरूको क्लोज सट खिच्ने, उसलाई भीडभाडमा मात्र उभ्याइदिने । दिनभरि काम गराएर पनि खाए नखाएको नसोध्ने । अरुणिमाले मलाई सुटिङमा ऊसँग गरिएको व्यवहारबारे बताई र अब सुटिङमा जान्न भनेर अड्डी कसी । मैले निर्देशक दीपक श्रष्ठलाई फोन गरेर ‘के हो डाइरेक्टर साब, मेरी छोरीलाई त कसैले पानी पनि सोध्दैनन् रे,’ भने । उहाँले ‘त्यस्तो नहुनुपर्ने,’ भन्नुभयो ।
हिरोइनका रूपमा निरुताको सान र सम्मान देखेपछि अरुणिमाले धेरै सोचिछे । ‘बैकमा जागिर खाएँ भने हिरोइनले जत्तिको मान-सम्मान कहाँ पाइन्छ र ? फेरि, मलाई ढोकामै हिरोइन बन्ने अफर आइरहेको छ भने किन नबन्ने ?’ उसले यस्तै-यस्तै सोचिहोला भन्ठान्छु ।
र, अरुणिमाले हिरोइन बन्ने निर्णय गरी । अजम्बरी मायामा उसले लामा-लामा संवाद पनि एकैसटमा ओके गरिछे । उसकी साथी कादम्बिनीले भने गर्न सकिनछे । उसको संवाद पनि अरुणिमालाई नै बोल्न लगाइएछ । उसकोे प्रतिभाको चर्चा चल्न थालेपछि यस्तै रहेछ जिन्दगानी नामक फिल्मबाट उसलाई अफर आयो । फिल्म कम्पनी नमस्ते नेपालबाट पनि फोन आयो । अरुणिमा र म गयौँ । त्यहाँ ऊसँग अनेक प्रश्न गरियो । उसले निडर भएर भटाभट जवाफ दिई । उसलाई नवरसमा अभिनय पनि गर्न लगाइयो । उसले फटाफट गरेर देखाई । उसको अभिनय देखेर नमस्ते नेपालका मानिस दंगै परे । उनीहरूले भने, ‘तिमी हाम्रो फिल्ममा छानियौ । राजेश हमालको बहिनीको रोल छ । हाम्रा अरू फिल्ममा पनि लिन्छौँ ।’
त्यसपछि अरुणिमाले शुभसन्ध्या भन्ने कार्यक्रममा एंकरिङ गरी । टेलिविज्ञापनका साथै मह जोडीले निर्माण गरेको टेलिशृंखला असल लोग्नेमा अभिनय गरी । फिल्म धड्कनबाट ऊ हिरोइनका रूपमा चम्की ।
किस सिन काटियो
निर्देशक दीपक श्रेष्ठले अजम्बरी मायामा अरुणिमाको दस जोड दुई पढ्ने सामान्य केटीको भूमिका हो, कुनै भद्दा सिन छैन,’ भन्नुभएको थियो । तर, पछि त कलेजको कुनामा अरुणिमा र केटाको किस सिन राख्नुभएछ । अरुणिमाले मलाई सबै कुरा बताई । मैले निर्देशकलाई ‘सामान्य रोल हो भनेर खेलाउने अनि अहिले मेरी अबोध छोरीलाई किस सिन दिन लगाउने ?’ भनेर कराएँ । उहाँले ‘किस सिन हैन, किस गरेजस्तो मात्रै गर्नुपर्छ,’ भन्नुभयो । क्यामेराम्यान मुरारीजीसँग सोध्दा उहाँले ‘फिल्ममा हेर्दा किसै गरेको देखिन्छ,’ भन्नुभयो । अनि मैले निर्देशकलाई भनेँ, ‘मेरी छोरी जुन दिन हिरोइन हुन्छे, त्यस दिन कथाअनुसार बलात्कार, किस सिन सबै दिन्छे । तर, अहिले त्यस्ता सिन खिच्न दिन्नँ,’ भने । पछि त्यो सिन काटियो ।
त्यसपछि निर्देशक दीपक श्रेष्ठले हल्ला चलाउनु भएछ, भावु दिदीकी छोरीलाई त छुन पनि हुन्न । दाग लाग्छ रे ।’ फिल्म लाइनमा हंगामै मच्चिएको थियो ।
लभ परेको रहेछ
अरुणिमा चम्कँदै गएपछि कहिले उसको नाम कुन निर्देशकसँग जोडियो, कहिले कुन हिरोसँग त कहिले कुन निर्मातासँग । म पनि कलाकार हुँ । मलाई थाहा छ- यी सबै मेरी छोरीको रिस गर्नेले चलाएका हल्ला हुन् । सम्पूर्ण फिल्म लाइन राम्रो छ भनेर म भन्दिनँ, तर यस लाइनमा नराम्रा मान्छेमात्रै छन् भन्नु केवल पूर्वाग्रह हो । अरुणिमाको जोसँग नाम जोडिए पनि त्यो बजारिया हल्ला मात्र हो भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ । उसको कसैसँग लभ अफेयर छ भन्ने मलाई थाहा थिएन ।
चाडबाडमा अरुणिमा विराटनगर उसको डयाडी-मम्मी (मेरा बहिनी-ज्वाइँ) कहाँ गइरहन्थी । त्यहाँ एकजनाले अरुणिमालाई निकै मन पराएका रहेछन् । उनले हाम्रा आफन्तमार्फत अरुणिमालाई प्रेम प्रस्ताव राखेछन् । अरुणिमाले मलाई पछि बताएअनुसार उसले ‘मसँग प्रेम गर्ने भए धेरै पढ्नुपर्छ, कम्तीमा डिग्री गर्नुपर्छ, बैंकमा जागिर खानुपर्छ, यस्तो लिखुरे होइन, हेन्डसम बन्नुपर्छ,’ भनेर केटाको सातो खाइछे । उनी अरुणिमालाई कति चाहँदा रहेछन् भने जिमसिम गरेर हेन्डसम बनेछन्, डिग्री गरेछन् अनि एनआइसी बैंकमा जागिर खाएछन् । उनीहरूको प्रेम चलिरहेको रहेछ । एक दिन अरुणिमाले मलाई हिन्ट दिई, भावु, आफ्नै जातको, डिग्री गरेको, बैंकमा जागिर खाएको केटा पाए ऊसँग मेरो बिहे गरिदिन्छौ ?’ मैले ‘त्यस्तो केटो पाए त टाउको फोरेरै दिन्छु नि,’ भनेँ । कुरा बुझ्दा उनीहरू सात वर्षदेखि प्रेम गरिरहेका रहेछन् । अनि, अरुणिमाको बिहे उनै केटा (अमित अर्याल) सँग गरिदियौँ । ज्वाइं निकै बुझकी हुनुहुन्छ । अरुणिमालाई निकै माया गर्नुहुन्छ ।
अरुणिमा सानैदेखि निकै खर्चालु छे । म फारु गर्न खोज्ने, ऊ भने पैसा उडाइहाल्ने । ऊ भन्छे, ‘लोभी हुनुहुन्न । मन परेको खाइहाल्नुपर्छ, लगाइहाल्नुपर्छ । म भने भोलिका लागि सोच्नुपर्छ भन्छु । ऊ भन्छे, ‘आज बाँच्नुपर्छ, भोलि देखा जायगा । यस कुरामा भने हामी आमाछोरीको ठाकठुक परिरहन्थ्यो ।
अहिले पनि ऊ निकै खर्चालु छे । विदेश गएर दुःखले कमाएको पैसाको पनि मलतब गर्दिन । कपडा, गिफ्टमै पैस्ाा सिध्याउँछे । मलाई २२ हजार रुपैयाँ पर्ने चस्मा उपहार दिएकी छे । ज्वाइँं साब पनि बिन्दास हुनुहुन्छ । उहाँ पनि लोभ गर्नुहुन्न । दुईजनाको जोडी खुब मिलेको छ ।
डिभोर्स हुने हल्ला चल्यो
एकपछि अर्का गर्दै अरू हिरोइनको डिभोर्स हुन थालेपछि फिल्म लाइनमा हल्ला चल्यो- अरुणिमाको पनि डिभोर्स हँुदै छ । अरू हिरोइन र अरुणिमामा धेरै फरक छ । उसको परिवार निकै समझदार छ । सम्धी-सम्धिनी, ज्वाइँं साब सबैले फिल्म लाइन कस्तो हुन्छ, राम्ररी बुझ्नुभएको छ ।
त्यस्तो मरिहत्ते गरेर बिहे गर्नुभएको ज्वाइँं साबले अरुणिमासँग डिभोर्स गर्नुहुन्छ ? अनि आफ्ना लागि सबथोक गर्ने श्रीमान्सँग अरुणिमाले नाता तोड्न सक्छे ? यो हुनै नसक्ने कुरा हो । पहिला यस्ता वाहियात हल्ला सुन्दा तनाव हुने गथ्र्याे, अचेल हाँसो उठ्छ ।
निर्देशक बन्न चाहन्छे
अरुणिमा निकै तगडा छे । अंग्रेजी फररर बोल्छे । त्यही भएर अंग्रेजी फिल्म रिमेम्बर मी र स्टार प्लसको सिरियल सोन परीमा अभिनय गर्ने मौका पाई ।
शंकरदेवमा बिबिएस पढ्दै थिई । फिल्मतिर व्यस्त भई । बिहे भयो । पढाइ पूरा गर्न सकिन । हामीलाई पढाइ सिध्याएकी भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर ऊ भन्छे, ‘अब म निर्देशक बन्छु । ऊ अब फिल्म कलेजमा निर्देशन पढ्न चाहन्छे । स्त्रिप्ट पनि लेख्छे । दीपशिखा फिल्मको स्त्रिप्ट उसैले लेखेकी हो । निकै क्रियटिभ छे । फिल्म बनाउँदै छे । उसको हरकदममा मेरो साथ र समर्थन छ ।
आमा बन्न चाहन्छे
अरुणिमा दुई वर्षभित्र आमा बन्न चाहन्छे । हामीलाई पनि नाति-नातिना खेलाउने रहर छ । तर, अहिले ऊ निकै व्यस्त छे । ज्वाइँ साहेब पनि दुई-चार वर्षपछि बाबु बन्ने भन्नुहुन्छ । आमा बनेपछि अरुणिमा फिल्म निर्माण र निर्देशनमा सक्रिय हुन चाहन्छे । फिल्म पनि खेलिरहन चाहन्छे । हाम्रो पनि त्यही इच्छा छ ।
प्रस्तुतिः लक्ष्मण सुवेदी
Posted by maha at 5:15 am	Tagged with: Arunima Lamsal, Radha Lamsal
Hifajat Yellow dress and Hindu Extremists Scandals in Nepali film industry